7 qof oo ku dhintay madaafiic ku dhacday suuqa Xamar-weyne, Muqdisho. – Radio Daljir
7 qof oo ku dhintay madaafiic ku dhacday suuqa Xamar-weyne, Muqdisho.
Muqdisho, Apr 27 – Inta la og yahay 7 ruux ayaa ku dhintay madaafiic galabta lagu tuuray suuqa Xamar-weyne ee magaalada Muqdisho iyadoo ku dhawaad 20 qofna ay ku dhaawacmeen.
dadka dhintay waxaa ku jira 4 haween ah oo dan yar ah kuwaasoo madaafiici ugu tagtay goobahooda ganacsi, waxaana arrintaani ka dambeysay markii Al-shabaab iyo dawladdu ay hoobiyeyaal isku weydaarsadeen magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale ururka Shabaab al-mujaahidiin ayaa sheegay inay fuliyeen qarixii maanta lagu qaaday xarunta bangigii hore ee ganacsiga Somaliya kaasoo ay dhawaan saldhig milleri ka sameysteen ciidamada Amisom ee jooga magaalada Muqdisho.
Qaraxa waxaa loo adeegsaday gaari waxaana ilaa iyo hadda la hubaa inuu ku dhintay qofkii is qarxiyey.
Afhayeenka ciidamada Amisom ayaa sheegay in labo askari ay kaga dhaawacmeen qaraxaasi laakiin warar madaxbanaan ayaa sheegaya in khasaaruhu intaasi ka badan yahay